Ogaden News Agency (ONA) – Xeerkasta Waxaa Loogu Xishaa Ama Loo Xushaa waa Sidii Looxeerin Lahaa By C/lahi C/ Ibraahim.
Xeerkasta Waxaa Loogu Xishaa Ama Loo Xushaa waa Sidii Looxeerin Lahaa By C/lahi C/ Ibraahim.
Posted by Dulmane	/ January 28, 2019
Xeerkasta waxaa loogu xiishaa Ama loo xushaa waa sidii loo xeerin lahaa!
Xilgudasho la’aan kasta Waxay leedahay Abaal marinteeda ku haboon, hadii Qof uu kaa gar-daranyahay oo aadan iska waabin waxaa Dhaca waxaan sax ahayn!
Dadka iyo habdhaqankooda iyagoo la kaashanaya Aqoontooda iyo waayo- aragnimadooda dhinaca Nolosha, ayay ku sarjaraan shakhsiga iyo wuxuu mudanyahay, Dhulka iyo khayraadkiisa.
Garnaqsigu waa hab la Daris ah Qaab nololeedka Guusha laga gaadho, markaan isbar-bardhigayno Aragtida guracan oo markasta guuldaradu la Daris noqoto intay doontaba ha jirtee.
Xeeladaha ay adeegsadeen wadamada harumaray ee dhinaca Arimaha Bulshadooda waa mid looga Dan leeyahay hormarinta shakhsiga Si looga faa’iidaysto isagna Guul uugu naaloodo, waa Aragti hab dhaqan sare xanbaarsan.
Halka ay seeto ku noqdaan Bulshadooda wadamada Dunida sadexaad lagu magacaabo Dadkooda taasi oo dhaxal siisa labada dhinacba xayndaab aan loo aayin marna.
Xikmad da’wayn ayaa ahayd: “Ruuxa wanaagsan markaad xurmaysid waad la wareegtaa, markaad sharaftid Qofka liitana wuu madax-adaygaa”
Qaab dhaqanka Ruuxa waa mid saamayn ay ku leedahay Deegaanka iyo bulshada uu la nool yahay taasi oo raad wayn ku reebta.
Iyadoo dabeecadahaas Dhalan rogistoodu ku adagtahay dabaqadaha qaar ee Bulsho kasta.
Tusaale ahaan Nin runsheeg badan way adagtahay in laga Aamino khalad, taasi badalkeedana waa tusaale dhab ah oo taas ka soo horjeedkeeda ah.
Ninba waayihii ayaa u runsheega go’aan qaadasho kasta markay wehel u tahay cida mudan in la la wadaajiyo ayaa Xareeda biyaha macaan la gaadhaa.
Waxaa fudud in waxyar lagaa xasuusiyo Awooda uu yeelan karo shakhsi Ama Bulsho inay tahay mid aan la holin karin, walaw aad iswaydiin kartid Bulsho garanaye shakhsigu kaligii intee in la eg ayuu miisaan yeelan karaa!
Labadaas oo wada Socota markaan haysano iyadoon Faan naga ahayn waa martabo Rabbi Wayne noo soo hoyiyay.
Dhulka duub,Adna ka kac waa Masalo maangal noqon karin.
Waxkasta oo Cusub wanaagiisa ayuu leeyahay, Sidoo kale gal xajiimeedna wuu wataa. Taas Waxay ubaahantahay in la saaro Miisaanka uu mudanyahay qodobkasta oo ina khuseeya.
Waxaan bogaadinaynaa Go’aamada waxtarka u leh Bulshadeena ee ay JWXO ka gaadho Arimaha khuseeya Ummadeena,kuwaasi oo hoy u ah sharafta iyo karaamada Dadkeena iyo jiritaankiisa Intaba. Guulaystayaal garabkiinaanu nahay markasta.
Markastana waxaan mudnaanta siinayna horukaca Dadkeena iyo sidii uu wax u qabsan lahaa uugana muuqan lahaa Bulsho waynta Geeska Africa ku dhaqan.
Cabdullaahi Cabdi Ibrahim.